YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 16
သတင်းစာများက ပြောသော ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် အမှု
ကိုထက်မင်းရှင့် ... ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်အမှုနှင့်တကွ အခြားသော သမိုင်းဝင်အချက်အလက်များအား
ကူးယူဖော်ပြခြင်းမှာ မည်သူ မည်ဝါကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း အလျှင်းမရှိပါ .
စီးပွားရေးအရ ကူးယူဖော်ပြခြင်းလည်းမဟုတ်သလို မည်သည့်နေရာမှ ကူးယူကြောင်းကိုလည်း ထင်ရှားစွာ
ကျမ အနေနှင့် မြန်မာကျူးပစ်မှာ မန်ဘာများ ဧ။် အဖိုးတန်အချက်အလက်များ စုဆောင်းရှာဖွေ တင်ပြမှူ နှင့် ဗဟုသုတ ဖလှယ်မှူဧ။် ရည်ရွယ် ချက်များတွင်
''အမှောင်ချခံထားရသော ခေတ်ဆိုးမှာ သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်မှန် များကို လူများသိစေရန်နှင့် နောင်လာနောက်သားတို့ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင် မျှလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင် စေလိုခြင်း '' ပါဝင်ပါသည်ဟု ယုံကြည်မိသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ..
စုဆောင်းရှာဖွေ ပေးခဲ့သော မြန်မာကျူးပစ် မန်ဘာများအား အတိုင်းမသိသော ကျေးဇူးတင်ခြင်းများနှင့်
ပြန်လည်ဖော်ပြ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် ...
BY မလေးမေ ... 3/16/20092အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/16/20090အကြံပြုခြင်း
BELIEVE IT ! 3
Parliamentary Friends of Burma (PFOB)(Canada) Statement on Burma's Human Rights Day 21st Anniversary
Parliamentary Friends of Burma (PFOB)
Larry Bagnell, Chair
Statement on Burma's Human Rights Day 21st Anniversary
Media Contact: (613) 995-9368
On March 13th, 1988, peaceful demonstrations by students of the Rangoon Institute of Technology (RIT) were brutally quashed by the military government led by General Ne Win, who had seized power in 1962. Several students, including Ko Phone Maw, were shot dead during these protests, which subsequently led to the 8888 uprising. This day has become known as Burma's Human Rights Day.
“Today, we are reminded of the Burmese people’s long and arduous struggle, for peace and democracy in their homeland”, said Mr.Bagnell.
“In Burma”, he continued, “human rights violations are committed daily, and include child soldiering, forced labour, displacement, destruction and theft of food supplies, murder, torture, rape and forced prostitution and political imprisonment”.
On this day, the Parliamentary Friends of Burma wish to honour the victims of the military regime, by keeping Burma at the forefront of Canada’s and the United Nations’ human rights agenda, as well as continue to urge other nations and communities to get involved and do all they can to stop the brutality and give the people of Burma the rights and freedoms that most of us take for granted.
ကိုရဲရင့်ငယ်နဲ့ ကိုအာဇာနည် တို့ကို ကျွန်တော် ဗိုလ်ထက်မင်းက လေးစားစွာ အကြောင်းကြား အပ်ပါတယ်။
တပ်မတော်သား အစစ်အမှန်များ အပိုင်း (၂) ဆောင်းပါးဟာ ကိုဖိုးတရုတ်ရဲ့  စည်းလုံးခြင်းရဲ့  အင်အား ဘာလောဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကျွန်တော် ဗိုလ်ထက်မင်းရဲ့  ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်များ အားလုံးလည်း သိရှိကြပါတယ်။ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်ကို အထူး သိရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါး ရေးသားသူကို အမှန်အတိုင်း ထုတ်ဖော် ရေးသားရန် အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မသိလို့ မဖော်ပြမိတာ ဆိုရင်လည်း အထောက်အထား အကြောင်းအရာနဲ့တကွ အောက်မှာ ရှင်းပြထားပြီး ဖြစ်လို့ ကျွန်တော် ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်ထက်မင်း ကိုယ်တိုင် အကြောင်းကြားတာမို့ ပြင်ဆင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ တင်ဦးရဲ့  အကြောင်းအား ကိုဖိုးတရုတ်ရဲ့  ဘာလောဂ်မှာ တင်ထားပြီး ဗိုလ်ကြီး အုံးကျော်မြင့် အကြောင်း http://www.scribd.com/word/full/3674140?access_key=key-2eyo0cr90q3g7xuejbtd
လင့်ခ်ချိတ်ထားတာကို လူကြီးမင်းများက တဆင့် ကူးယူ ဖော်ပြရာမှာ ကိုဖိုးတရုတ် ဘာလောဂ်မှ ကူးယူ ဖော်ပြတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအား ဖတ်စေချင်တဲ့ ဆောင်းပါးများ ဆိုပြီးတော့ ကိုဖိုးတရုတ်ရဲ့  ဘာလောဂ် ညာဘက် Sidebar အောက်ဆုံးမှာလည်း ဒီဆောင်းပါးကို တင်ထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်လို့ အဲဒီက ကူးရင်လည်း ကိုဖိုးတရုတ် ဘာလောဂ်က ကူးတယ် ဆိုတာနဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်ထက်မင်း ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ ဖော်ပြပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ လင့်ခ်ရှိ ဆောင်းပါးအား ကိုဖိုးတရုတ်မှ www.scribd.com သို့ Upload တင်ခဲ့ပြီးတဲ့ အချက်အလက် အထောက်အထားကို ကိုဖိုးတရုတ် ဘာလောဂ်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်ထက်မင်း ရေးသားထားတဲ့ ဗိုလ်ကြီး အုံးကျော်မြင့် အကြောင်း တပ်မတော်သား အစစ်အမှန်များ အပိုင်း (၂) ဆောင်းပါး ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုရဲရင့်ငယ်နဲ့ ကိုအာဇာနည်ရဲ့  ဘာလောဂ်မှာ ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုအာဇာနည် ဘာလောဂ်မှာ ရုရှားက အရာရှိ တစ်ယောက် ရေးတဲ့ သဘောမျိုး ဖော်ပြထားတာ တွေ့လို့ အခုလို အီးမေးလ်ပို့ပြီး အကြောင်းကြား ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နှစ်သက်ဖတ်ရှုတဲ့ ကိုရဲရင့် ဘာလောဂ်နဲ့ ကိုအာဇာနည် ဘာလောဂ် အနေနဲ့ ကိုဖိုးတရုတ် ဘာလောဂ်က ကူးယူ ဖော်ပြတယ် ဆိုတာနဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဗိုလ်ထက်မင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်း ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ပေးစေ လိုပါတယ်။
မတ်လ ၁၆ ရက် ၂၀၀၉
ဗိုလ်ြ့ကီး အုန်းကျော်မြင့် ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု post ကိုညီမငယ် မလေးမေကတင်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာကျူးပစ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါတယ် . လို့credit ပါတယ်.....
အာဇာနည်ဘလော့မှာ Posted by Nayminthuria ဖြစ်ပြီး
(ရုရှားရောက် ဂျူနီယာများအတွက်...ငါတို့ တပ်မတော်မှာ သူလိုလူမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ တပ်လှန့် နှိုးဆော်ခြင်း........
ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ထူးချွန်ထက်မြက်ခဲ့ပြီး မဆလခေတ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း OTS (၂၉)သင်တန်းဆင်းမှာ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းဆုရရှိခဲ့သူပါ။ စစ်ရုံးချုပ်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ မိန့် ခွန်းကအစ ဗိုလ်ကြီးအုံးကျော်မြင့်ရေးတယ်ဆိုရင် လူကြီးတွေကစိတ်ချလက်ချရှိတဲ့အထိ ထူးချွန်ထက်မြက်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ အာဏာရူးဦးနေ၀င်း အုပ်စုရဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှာမှုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ကိုင်တွယ်ပုံကြောင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်နေမှုကို ကိုယ်တွေ့ မြင်ခဲ့ရပြီး ဆင်းရဲနုံခြာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ စနစ်အပေါ်သံသယ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ တရားမျှတမှုကို မွေးရာပါမြတ်နိုးခဲ့တဲ့ သူဟာ နောက်ဆုံးမှာ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကို အရင်းခံလို အာဏာရူး ဦးနေ၀င်းကို ဖြုတ်ချပြီး အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံစည်မှုမှာ သူဟာသေဒဏ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
ကနေ့ ခေတ်တပ်မတော်ဗိုလ်လောင်းတွေမှာ သူလိုလူမျိုးတွေ မရှိမဟုတ်...သေချာပေါက်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်လောင်းတွေကို ဗိုလ်ကြီးအုံးကျော်မြင့်လို မဖြစ်ရအောင် ရုရှလွှတ်ကတည်းကိုက စက်ာပူ၊ ထိုင်း လေဆိပ်တွေကလေယာဉ်မပြောင်းရတဲ့ စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ငှားပြီး တိုက်ရိုက်ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ...ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ဟာ ဟိုးအတိတ်မှာ မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့ ကျန်ခဲ့ပြီဆိုတာ သိရခဲ့ပါပြီ။ အပြင်ထွက်ဖို့ အခွင့်မသာတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတွေဟာ အားလပ်ချိန်တွေမှာ အင်တာနက်ကခရီးထွက်ရင်း ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း သိသင့်သလောက်သိခဲ့ကြပါပြီ။ တချို့ ကြွက်ချီးတွေကလွဲလို့ ပေါ့။
ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်လို သို့ မဟုတ် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ဆူစီလိုဗန်ဗန်း လို လူမျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း.....)
ကိုရဲရင့်ငယ်မှတဆင့် http://www.scribd.com/word/full/3674140?access_key=key-2eyo0cr90q3g7xuejbtd သို့ ရည်ညွှန်း
ဒီနေ့ဖေါ်ပြထားတဲ့ တံတားနီ ဆိုတဲ့post file လေးကိုကြ့ည်ပါ။ ရေးသူကိုဖေါ်ပြထားသလိုဖေါ်ပြသည့်ဘလော့ကို
တဆင့်မှတဆင့်ဆိုတော့မိမိ file ကိုမလွှတ်ခင် အပြည့်အစုံထည့်သွင်းဖေါ်ပြကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
codeကို Embed လုပ်ခွင့်မပေးထားပါဖူး...တင်လို့ရအောင်တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလိုမသိမသာလေးကျူး
ဓမ္မတာ (သမရိုးကျ) မဟုတ်သော လိင်ဆက်ဆံမှုများ နှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ(ဆေးပညာဆောင်းပါး)
“ကိုကိုအောင်တိုးရဲ့ အလွဲတကာ့ လွဲလွဲလွဲလွဲ များအကြောင်း”(....သွား... လူဆိုး၊ သူခိုး၊ ငတိုး။....)
"ကြည်...ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားရရင် စားချင်တယ်"
""ငါတို့ အားကိုးပါရစေ"" ဆိုလာကြ၊
""ငါတို့ကယ်မယ့် မင်းလောင်းပေါ်ပြီ"" ပြုံးပျော်ကြ
""ငါတို့ စွန့်ပါရစေ"" ဆိုပြီး ရှေ့ထွက်လာကြ
အလောင်းကောင်တွေဆင့်ပြီး ထမ်းတင်ပေးခဲ့တာ မမေ့နဲ့။"" . . . . .
By Burma Democratic Concern UK Ko Myo Thein
မောင်ဘုန်းမော် အမှတ်တရ ဖြန့်ဝေသည်
Parliamentary Friends of Burma (PFOB)(Canada) Stat...